Igbo, John: Lesson 113 - Ikwanye n'akụkụ Jizọs (Jọn 19:31-37) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 113 (Piercing Jesus' side)
4. Obe na ọnwụ Jizọs (Jọn 19:16b-42)
e) Ikwanye n'akụkụ Jizọs (Jọn 19:31-37)
31 Ya mere, ndi Ju, n'ihi na obu oge Nkwadebe, ka aru ahu ghara idi n'osisi n'obe Sabbath (n'ihi na Sabbath ahu bu ihe puru iche), gwara Pilate ka agbaji ukwu ha, ka ha we ewepụ ya. 32 Ya mere ndi-agha biara, tijie ogwe-ukwu nke onye mbu, na nke ọzọ nke akpọgidere Ya na Ya n'obe; 33 Ma mgbe ha bịakwutere Jizọs, ma hụ na ọ nwụọla, ha agbajighị ụkwụ ya. 34 Otú ọ dị, otu n'ime ndị agha ji ube maa ya n'akụkụ, ozugbo ahụ, ọbara na mmiri gbapụtara. Onye ahu nke huworo ab͕awo àmà, àmà-ya bu kwa ezie. Ọ maara na ọ na-agwa eziokwu ahụ, ka i wee kwere. 36 N'ihi na ihe ndia mere, ka ihe edeworo n'akwukwọ nsọ we mezu, si, Agaghi-etiji ọkpukpu-ya. 37 Ọzọ kwa ihe ọzọ edeworo n'akwukwọ nsọ si, Ha gāhu onye ha turu ub͕u.
N'ịbụ ndị na-amụ banyere Iwu nke ha, ndị Juu enweghị obi ọmịiko. Iwu Mosis bu na aru nke ndi ahu ndi ozo ka ewepu. Ya mere ndị Juu jiri nke a mee ihe nye ndị ikom atọ a kpogidere. Ha na-ewute ha ilele ọnọdụ ahụ jọgburu onwe ha n'oge ememme ha. Ha gwara Paịlet ka ọ kwụsị ndị mmadụ ngwa ngwa site n'ịkwụsị ụkwụ ha. Ndị ikom a kpọgburu akpọgbu pụrụ mgbe ụfọdụ ịnwụ ụbọchị atọ. Mkpịsị aka na ụkwụ anaghị egbu oge ọ bụla, n'ihi ya, ndị agha gara n'ihu ịkụda ozu ahụ na-eti mkpu.
Ndị agha ahụ kwụsịrị tupu Jizọs ahụ na ọ nwụọla. Ume ya di ike site na nkpu, na nkpuru obi ya na nkpà n'okpuru oke ikpe anyi na iwe Chineke n'elu uwa. Jisos nwuru n'enwegh onwe ya iji me ka ayi na Chineke di n'udo. N'ịbụ ndị na-echechaghị banyere ihe metụtara okpukpe, ndị Juu nọ na-echegbu onwe ha iji jide n'aka na Jizọs anwụọla. Otu n'ime ndị agha ahụ were ube wee maa ya n'akụkụ Kraịst n'akụkụ obi ya. Mmiri na ọbara tụgharịrị, na-egosi na ọ nwụọ tupu oge elekere isii nke Ezi Friday.
Ihe omume a na - agwa Onye Kraịst na Chineke na - emeri site n'akụkụ atọ. Nke mbu, Setan kpaliri ndi Ju ka ha gbalie imebi ogbugba nke Kraist nke na onye obula puru ikwu na onwu bu onyinye Chineke. Ememme ememe ngabiga chọrọ ka Nwa Atụrụ ahụ ghara ịdị ọcha n'enweghị ọkpụkpụ gbajiri (Ọpụpụ 12:46). Ya mere, Chineke chebere Ọkpara ya ọbụna n'onwu, ọ dịghịkwa onye ọ bụla nwere ike ịjụ oge ọhọpụtara ya dị ka Nwa atụrụ Chineke.
Nke abuo, ihe agha nke onye agha na-agbanye n'akụkụ Jizọs nwere ihe odide ya dị na Zekaraịa 12:10. Na Zekaraịa 11:13, onye amụma ahụ hụrụ na ndị Agba Ochie jiri Onye Ọzụzụ Atụrụ ha kpọrọ ego ọlaọcha iri atọ ọzọ. N'agbanyeghị obere ego a, Chineke ga-awụsa mmụọ nke amara na ekpere n'elu ụlọ Devid na ndị bi na Jerusalem, ka anya ha wee meghee ma mata onye Onye ahụ a kpọgidere na ya bụ na Nna ya. Oburu na ihe omuma a agagh amata Chineke ma obu nzoputa Ya. Onye ahu a kpokotara anwu bu nani uzo nke inweta Mo Nso nke Chineke, dika ayi guru, "ha gelegide ya anya onye ha tuworo uzo".
Nke ato, onye na-eso ụzọ nke ji ikwesị ntụkwasị obi nọgide n'obe bụ onye akaebe anya maka ihe niile mere ma kwuo ya. Enye ama efehe ke ini enye okokụtde mme ekọn̄ oro ndien enye ikanamke Obio esie ke ama ama akakpa. Ọ hụrụ akụkụ nke n'akụkụ Jisọs, na-agba anyị àmà maka ịhụnanya nke Chineke, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ka anyị nwee ike inwe okwukwe na ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu, na ndụ ebighi ebi.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ị bụ Victor n'elu mmehie, Setan na ikpe. Ị bụ Onye dị ndụ, Eze na Nna na ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ.
Gịnị ka anyị na-amụta site n'eziokwu ahụ bụ na ọkpụkpụ Kraịst adịghị agbagha?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:51 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)